राम्रो र आकर्शक बन्न चाहनुहुन्छ ? यस्ता उपायहरु अपनाउनुहोस् - dsnews
राम्रो र आकर्शक बन्न चाहनुहुन्छ ? यस्ता उपायहरु अपनाउनुहोस्
एजेन्सी । मेवालाई पहिरनको फल पनि भनिन्छ । मेवामा प्रसस्त मात्रामा इन्जाइम र पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छन् । यसले तपाईँको छालालाई भर्खरको र ताजा राख्छ । त्यसैगरी मेवाको कालो दानाहरु पिसेर लगाउनाले छालाको बिषादी र मरेका कोषहरु फाल्न मद्दत गर्छ ।
सुन्तलामा प्रसस्त मात्रामा पौष्टिक तत्वहरु पाईन्छन् । त्यसमध्ये ए भिटामिन सी हो जुन कोलाजीन नामक छालाका रेसाहरु बनाउन चाहिन्छ । यति नभई सुन्तलाको रस र बोक्राले छालामा मालिस गर्नाले छालाको प्वालमा जम्मा भएका फोहर हटाई छाला स्वस्थ राख्दछ ।
छालामा चमक ल्याउन स्याउको एकदम ठूलो भूमिका हुन्छ । यसमा हुने भिटामिन सी छालाको लागि फइदाजनक छन् । यति मात्र नभई स्याउमा प्रसस्त मात्रामा पाइने पोटासियम छालाको लागि जरुरी हुन्छ ।
Previous गुप्ताङ्गको दुर्गन्ध कसरी हटाउने ?
Next यसरि बढाउनुहोस् रोग प्रतिरोधक क्षमता ?